Mustaqbalka Mobaylka | Martech Zone
Maalmo kasta, aniga iyo gabadhayda waxaan isku khilaafnaa cidda leh fiilada lacag bixinta. Waan jeclahay xariggayga waxayna jeceshahay inay xarigga uga tagto gaarigeeda. Haddii taleefannadeennu labaduba ay ka hooseeyaan boqolkiiba hal lacag oo keliya… iska ilaali! Telefoonnadeennu waxay ka noqdeen qayb ka mid ah qofkeenna. Waa nudaha isku xidhka ah ee saaxiibadeena, duubista xusuusta aan hadda leenahay, saaxiibkeen oo ina xusuusinaya waxa xiga ee la samaynayo, iyo xitaa qaylodhaantayada aan ku soo toosno subaxa dambe. Markay dhimato, waxaan dareemeynaa inaan ku lumnay cidlada. 🙂
Mustaqbalku muxuu yahay? Aniga aragtidayda, desktop-ka, laptop-ka iyo xitaa kaniiniga ayaa nolosheena ka baaba'aya kuligeenna waxaan si fudud ku heli doonnaa taleefannadeenna. Markaan shaqada fariisaneyno, taleefankayaga ayaan kala soo bixi doonnaa oo waxaan ka daawan doonnaa shaashadda laga heli karo horteenna… Arimaha fiilooyinka, fiilooyinka, iskuwareejinta, iwm. Dhamaan waa lakala tagi doonaa, kuligeen waxaan si fudud kuwada socodsiin doonaa telefishankeena, raadiyahayaga, gawaarideena iyo waxkasta oo kale oo aan kuheleyno telefoonkeena. Shirkadaha baahinta iyo fiilooyinka ayaa baaba'aya maaddaama qalabka mobiilku uu udub dhexaad u yahay isku xirnaantayada oo dhan. Boorsooyinka ayaa xitaa waayi doona maadaama aqoonsigeenna lagu xaqiijin karo aaladda moobaylka.
Waxaan rajeyneynaa, inta udhaxeysa hadda iyo kadib waxaan ogaaneynaa sida loo dheereeyo nolosha baytariyada aaladeena, dardar galino waqtiyada lacag bixinta iyo / ama mastarada soojiidashada (fiilada la'aan)… si aniga iyo gabadheyda aanan ugu dagaalin fiilada xeedho!
Tani infographic laga soo qaatay Saddex waxay ina siineysaa aragti mustaqbalka dhow ee korsashada mobilada!
Tags: 2014201520162017mustaqbalkacaalami ahSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkakoritaanka wareegatirooyinka wareegaSaadaalintasmartphoneadduunka